Downloader Internet Download Manager Windows Software
IDM ( Internet Download Manager ) 6.41 Build 2
Maung Pauk at 6:58:00 PM 0
2022 ခုနှစ်၊ မတ်လ 24 ရက်နေ့ ထွက်ထားတဲ့ IDM ( Internet Download Manager ) 6.40 Build 11 ကို Full Version Free သုံးချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ပထမဆုံး ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်ထောင့်နားက Tray ထဲမှာ IDM icon လေးရှိရင် ညကလစ်ထောက်ပြီး exit ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ..
ပြီးရင် Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ..
ပြီးရင် Activation.cmd ကို Double Click ခေါက်ပြီး Run ပေးလိုက်ပါ.. ခဏနေရင် ..ကီးဘုတ်ပေါ်က ဂဏန်းတွေကိုနှိပ်ဖို့ Menu တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်.. ကီးဘုတ်ပေါ်က 1 ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. သူ့အလိုလို Activate လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်... အဆုံးမှာ Activation Successful ဖြစ်ရင် ရပါပြီ..
Download IDM 6.40 Build 11 Full : 10.6 MB(Credit to : Soft98.ir)
Dominic Purcell at 6:30:00 AM 0
Revo Uninstaller Pro 5.0 Crack Download Links:
Internet Download Manager PC Software Windows Software
Maung Pauk at 11:00:00 PM 0
ပြီးရင် Activation.cmd ကို Double Click ခေါက်ပြီး Run ပေးလိုက်ပါ.. ခဏနေရင် ..ကီးဘုတ်ပေါ်က ဂဏန်းတွေကိုနှိပ်ဖို့ Menu တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်.. ကီးဘုတ်ပေါ်က 1 ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. သူ့အလိုလို Activate လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်... အင်တာနက်ဖွင့်ထားရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်.. ကီးတစ်ခုအဆင်မပြေရင် အခြားကီးတစ်ခုကို ပြောင်းပြီး Activate လုပ်ပေးပါတယ်.. အဆုံးမှာ Activation Successful ဖြစ်ရင် ရပါပြီ..
Laptop Specifications Xiaomi
Core i5-11300H, 16GB RAM, 512 GB Storage : 7999 yuan (US$ 1238 / Rs. 91,965 approx.)
Core i7-11370H, 32GB RAM ,1 TB Storage : 9999 yuan (US$ 1548/ Rs. 1,14,960 approx.)
Sale in China : 9th July 2021
Laptop Realme Tech News
Maung Pauk at 1:00:00 PM 0
Realme ဟာ စမတ်ဖုန်းလောကရဲ့ နေရာတနေရာမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်တာကိုအားမရသေးတော့ Smart TV တွေ၊ Smart နာရီတွေ၊ Wireless နားကြပ်တွေရဲ့ စျေးကွက်တွေပါ ဝင်ရောက်နေရာယူလာပြီဖြစ်ပါတယ်..
နောက်တဆင့်အနေနဲ့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး Laptop ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်.. Realme Book Slim လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ ဒီ Laptop ကို သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ ၁၂ နာရီခွဲမှာ မိတ်ဆက်မှာဖြစ်တယ်လို့ အိန္ဒိယ Realme ဌာနကနေ ရေးသားခဲ့ပါတယ်..
ဘယ်လို Spec တွေနဲ့ပွဲထုတ်လာမလဲ..
အထူးပြုထားတာကတော့ smartphone connect feature စနစ်ကို Highlight လုပ်ထားတာတွေ့ရပြီး ဒီစနစ်က Huawei ရဲ့ Share, Microsoft ရဲ့ Your Phone လိုစနစ်မျိုး ဖုန်းကို အနားကပ်လိုက်ရုံနဲ့ Laptop နဲ့ အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်တဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်..
Display ကို 2160x1440 pixel Resolution မှာ အလင်းအား 300 nits ထိ ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
CPU ကတော့ Intel Core i5-1135G7 ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီး 16GB RAM နဲ့ 512 GB PCIe Storage ရှိပါမယ်..
Harmon Kardon ရဲ့ Stereo Speaker ကို ၂ လုံး Dual တပ်ဆင်ပေးထားပါမယ်..
၁.၅ ကီလိုဂရမ်သာလေးတဲ့ ဒီ Laptop ပါးပါးလေးမှာ 54 Whr Battery ကို 65W fast-charging စနစ်နဲ့အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး USB 3.2 1 port နဲ့ USB Type C 3.12port ပါဝင်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်..
စျေးနှုန်းကတော့ 55000 ရူပီး (740 US$ ခန့်) နဲ့ရောင်းချသွားမယ်လို့သိရပါတယ်..
ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးအားသွင်းစနစ် 200 Watt Hyper Charge ကို Xiaomi မကြာခင်ပွဲထုတ်တော့မယ်
လွန်ခဲ့တဲ့လ အနည်းငယ်က Xiaomi ဟာ 200 Watt နဲ့ 120 Watt ကြိုးတပ်/ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်တွေကို စမ်းသပ်ပြသခဲ့ပြီးတဲ့နောက် လာမယ့် ၂၀၂၂ ဇွန်လလောက်မှာ 200 Watt ကြိုးတပ်အားသွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ပြီး စျေးကွက်ထဲ တင်ပို့နိုင်တော့မယ်လို့ Digital Chat Station က ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်.. အဲဒီကာလမှာပဲ ဒီအားသွင်းစနစ်နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့ Flaship smatphone တွေကလည်း စျေးကွက်တင်ဖွယ်ရှိပါတယ်..
အတွင်းသတင်းပေါက်ကြားချက်အရ 200W ဟိုက်ပါအမြန်အားသွင်းစနစ်ကို Mi Mix5နဲ့အတူပွဲထွက်လာဖွယ်ရှိပြီး Wireless အားသွင်းစနစ်ကတော့ 50W ပဲရှိနေအုံးမယ်လို့ဆိုပါတယ်..
Xiaomi ဟာ နည်းပညာတိုးတက်မြင့်မားမှုမြန်ဆန်လျက်ရှိပြီး အံ့သြစရာကောင်းလောက်တဲ့ Mi 11 Ultra နဲ့ Mi Mix4လို Flaship Smartphone တွေကို 67W နဲ့ 120W အမြန်အားသွင်းစနစ်တွေတပ်ဆင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. 120W အမြန်အားသွင်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ နည်းပညာပိုင်းအရ နိုင်နင်းလာတဲ့ Xiaomi ဟာ 200W အားသွင်းစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ သေချာတယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး..
နမူနာအားသွင်းပြလိုက်တဲ့ 200W ဟိုက်ပါအမြန်အားသွင်းစနစ်ဟာ 4000 mAh ဘက်ထရီကို ၃ မိနစ်အတွင်း ၅၀% ထိသွင်းပေးနိုင်ပြီး ၁၀၀% အားအပြည့်ဝင်ဖို့ ၈ မိနစ်သာ ကြာမြင့်ပြီး 120W အားသွင်းစနစ်ကတော့ 4000 mAh ကို ၁ မိနစ်မှာ ၁၀%၊ ၇ မိနစ်မှာ ၅၀% နဲ့ ၁၀၀% အားပြည့်ဖို့ ၁၅ မိနစ်သာ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်..
Source : GIZChina, MyDrivers
6.67″ CUP Full Screen Display, 3D curved AMOLED, 2400×1080, 400 ppi (camera zone) , Supports P3 color gamut, JNCD≈0.34, dE≈0.40, 120Hz refresh rate, 480Hz touch sampling, contrast ratio: 5,000,000:1, 10-bit TrueColor, Supports Dolby Vision, HDR10+, 360° ambient light sensor, Corning® Gorilla® Glass Victus™
108MP main camera: 1/1.33″ HMX sensor, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, OIS, 7P lens, 13MP ultra-wide angle camera: free-form lens, FOV 120°, 6P lens, 8MP periscope camera: 5X optical zoom, 50x digital zoom, OIS
4,500mAh battery with MTW technology, 120W wired charging: 21mins to 100% in default mode, 15mins to 100% in Boost Mode*,
Custom 1014 linear top speaker, 1216P linear bottom speaker, SOUND BY Harman Kardon, Hi-Res Audio Certification, Hi-Res Audio Wireless Certification